Dibed-baxyo lagu ayidayo heshiiskii maamul sameynta gobolada dhexe oo ka socda degaanada Galmudug
Degaano ka tirsan gobolka Mudug oo uu ka taliyo maamulka Galmudug ayaa waxaa saaka ka socda dibed baxyo lagu taageerayo heshiiskii maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho.
Degaanada au dibed-baxyada ka dhacayaan ayaa waxaa ka mid ah Hobyo, Wisil iyo meelo kale, iyadoo dibed baxa ugu weyna uu ka socdo Koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Madax ka tirsan maamulka Galmudug oo dibed baxyadaas ka qeyb galay ayaa uga Mahad celiyey shacabkii isu soo baxay sida ay u taageereen heskiiskaas oo ay sheegeen inuu yahay mid taariikhi ah.
Dhinaca kale, banaanbaxyo looga soo horjeedo isla heshiiskaas ayaa laga qaban qaabinayaa woqooyiga magaalada Gaalkacyo oo uu ka taliyo maamulka Puntland.
Madaxda maamulka Puntland ayaa shalay sheegay iney xiriirka u gooyeen dowlada Somalia oo ay ku eedeeyeen iney ka xad gudubtay dastuurka, isla markaana qeyb ka mid ah dhulka maamulkaas hoos taga ay ku dartay maamul kale.
Sidoo kale waxaa heshiiskaas ku gacan seyray maamulada ahlu suna iyo Ximan iyo Xeeb oo sheegay ineysan iyaga waxba ka khuseynin heshiiskaas, aysana dhaqan gelin doonin.